Ndingasasaza njani kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingasasaza njani kwiTwitch?
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 294
Esi sicelo, intandokazi yabo bonke abadlali, ukubonisa abanye abalandeli bevidiyo yomdlalo wakho ngamava akho edabi. Inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezili-15 ababhalisiweyo nabasebenzayo mihla le kuyo, eyona nto inomtsalane kule nethiwekhi yokuhambisa kukuhambisa imidlalo ebukhoma, enika umbukeli imvakalelo yokuthatha inxaxheba kumdlalo.
Ingakumbi yindawo yokuhlangana yabathandi bemidlalo yevidiyo, enye yezinto ezinomtsalane kukuba akukho luhlobo kuthintelo lolu hlobo, oko kukuthi, banokudlala umdlalo wevidiyo, umbukeli uya kuba neendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo . i amajelo amaninzi okusasaza, ethi ke yona iphuhlise umdlalo womdlalo obonwabisa kakhulu.
Kodwa ayisiyiyo kuphela ukusasaza okuthatha inxaxheba kwaye baneziteshi zabo, banokuba namajelo abo Abenzi bemidlalo yevidiyo, iimagazini ezizodwa ngesihloko kwaye ke ngokuqinisekileyo iingcali nabagxeki beli candelo. Apho izihloko ezahlukeneyo zigutyungelwe, ewe, zonke zinxulunyaniswa nemidlalo yevidiyo.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile khuphela kwaye ufake Ukusasaza ngokufanelekileyo isoftware, oku kubalulekile, ngaphandle koku ngekhe wenze nto kwaphela.
Uya kufumana iintlobo ezahlukeneyo kwintengiso, kuya kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezininzi ngaphambi kokukhetha isoftware oza kuyisebenzisa, kuba oku kuya kuhambelana nenkqubo yakho yokusebenza.
Nje ukuba inkqubo yokufaka isoftware igqityiwe, kuya kufuneka wenze iakhawunti kwiTwitch. Ukwenza oku ngqo eqongeni, ngenisa ukhethe igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, kufuneka ubhalise iakhawunti ye-imeyile apho uza kufumana khona ulwazi kunye nezaziso.
Zimbini iintlobo zeakhawunti Kweli qonga, simahla kunye nenkulumbuso, kule yokugqibela kuya kufuneka uhlawule, kwaye ukufikelela kuyo uyenza ngeAmazon Prime, nje ukuba ugqibezele ubhaliso uya kufumana ikhonkco lokuqinisekisa kwiakhawunti ye-imeyile ukugqiba irejista.
Xa ugqiba ubhaliso Uya kudinga ukumisela iakhawunti. Uya kuyenza ngolu hlobo lulandelayo: faka useto lokhetho, khetha icandelo lolwazi lweprofayile
Apho uyakubonisa khona ulwazi olucelwe yile nkqubo:
Igama likawonke-wonke, ligama abalandeli bakho abaya kulazi.
Ifoto, Ngale nto iya kuthi abalandeli bakho bayamkele.
Ibhayiloji encinci Indlela oza kuzazisa ngayo kwabanye abasebenzisi kwaye eya kuthi ivumele abalandeli bakho ukuba bazi ngcono.
Emva koku, okona kucetyiswayo kukuba uqwalasele ijelo lakho lokuhambisaOku kubalulekile kuba kungale ndlela apho uya kuthi ubambe abasebenzisi abaya kuthi ekugqibeleni babe ngabalandeli kunye nabalandeli.
Kufuneka unakekele nganye nganye inkalo yeseto lesitishi. Uyilo, imo yezindlu, isihluzo sokukhusela, phakathi kwezinye iinkcukacha zobugcisa.
Esi sisiseko sephepha ngoluhlobo, Nantsi into abanye abasebenzisi abaza kuyibona Kwaye njengoko sele sikuxelele, kubalulekile ukuba ufumane abalandeli.
1 Ukusetyenziswa kweTwitch:
2 Ndiyenza njani:
3 Apho uyakubonisa khona ulwazi olucelwe yile nkqubo:
4 Ukucwangciswa koSasazo:
Ungazikhuphela njani iividiyo okanye iaudiyo?
Indlela yokwandisa abalandeli kwi-Instagram?